ORANGE: FAA'IIDO IYO WAXYEELO, ISTICMAALKA DAAWEYNTA, SIDA LOO DOORTO IYO DUKAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Orange: imisa kalori, maxay yihiin fitamiinada ay ku jiraan, maxay tahay faa'iidada, qofka waxyeelleyn kara
Orodka quruxda leh ee macaan leh waa mid ka mid ah midhaha ugu jecel badan. Midabka cagaaran ee citrusku waxay hagaajinaysaa niyadda, iyo qadar badan oo fitamiin C ah oo ka kooban waxkasto oo si fiican u dhiirigeliya kuna dhiirigeliya. Waxyaabaha kale ee bogsoonaya ee midhaha - aynu sii eegno dheeraad ah.
Orange wuxuu u wanaagsan yahay caafimaadka bani-aadmiga sababtoo ah qaabka waxtarka leh ee qaybaha waxtarka leh, kuwaas oo loo tixgelinayo inay yihiin aasaaska fitamiin C. Hal miro yar ayaa ka kooban ilaa 60 mg oo ah ascorbic acid, taas oo ka badan 50% caadada maalin kasta ee qof. ilaa Faytamiin iyo macdanta macdanta ee liinta oo ay ku sifeeyeen:
fitamiinada B1, B2 iyo A;
Halabuurka miro ayaa ah mid isku dheeli tiran oo loo isticmaali karo daaweyn dhamaystiran oo ku saabsan daaweynta hargabka, cudurrada faafa, cudurrada viral ee marxaladooda hore. Miro orange waxaa loo tixgeliyaa ilaha pectin, folic acid, iodine, bioflavonoids, kuwaas oo leh antioxidant, nadiifinta iyo guryaha anti-bararka.
Ma taqaanaa? Qadarka ugu sarreeya ee qaybaha qiimaha leh ee ku jira arrinta caddaanka ah ee hoosta diirka - albedo. Isticmaalka macdanta citrus oo ay weheliso albedo waxay leedahay saameynta ugu xoogan ee ka hortagga dhiig yari, waxay u adeegtaa sidii looga hortagi lahaa cudurrada kansarka.
Orange ayaa leh qaybta cuntooyinka hoose ee kalooriga: waxaa jira 47 kcal oo keliya 100 g.
Qiimaha nafaqada waa:
Waa maxay sababta uu orange u yahay?
Orange wuxuu nuujiyaa jirka bini'aadamka oo leh fitamiino iyo macdano qiimo leh, taas oo u oggolaaneysa in loo isticmaalo daaweynta iyo ka hortagga cudurada kala duwan. Waxyaabaha sarreeya ee fitamiin C ayaa caawiya soo celinta awoodda, ka ilaalinta cudurrada faafa iyo cudurrada faafa, waxay horumariyaan difaac. Qaybta isku dheelitiran ee miro waxay ka dhigeysaa suurtogalnimada horumarinta shaqada nidaamka wadnaha, dhiig-baxa caadiyan, waxay gacan ka geysaneysaa xoojinta unugyada lafaha iyo hagaajinta waxqabadka mareenka caloosha iyo mindhicirka.
Hoyga, waxaa suurtogal ah in lagu koro geed jilicsan oo dhagax ah oo dhagax ah.
Citrus waxay saameyn ku leedahay qaababka gudaha ee jirka, oo ay ku jiraan xubnaha taranka. Waxay hagaajineysaa tayada shahwada, taasina waxay gacan ka geysataa fahamka degdegga ah ee ilmaha. Cunidda hal cunug oo kaliya maalintii ayaa ka ilaalinaysa shahwada cudurrada hidda-socodka oo keeni kara cillado ilmo mustaqbalka ah.
Midhaha waxay u adeegtaa sida daaweynta dabiiciga ah ee dabiiciga ah, waxay hagaajineysaa fiicnaanta ka dib marka la cuno cabitaanka khamriga.
Wax yar waxtar uma leh shaqeynta taranka liinta dumarka, gaar ahaan haweenka uurka leh. Folic acid ee qaabka ay ka qaybqaato si habboon habka nidaamka dareemayaasha ee ilmaha, yaraynaysaa halista ah horumarinta wadnaha wadnaha.
Qalabka antioxidant ayaa si aan qarsoodi lahayn u ilaalin maqaarka ka soo baxa laalaabkii hore, ilaaliya cufnaanta, dabacsanaanta iyo jiritaanka maqaarka.
Ma taqaanaa? Cilmi-baadhayaashu waxay muujiyeen in limonoids ee midabka liin-macaanku uu horjoogsanayo horumarka iyo koritaanka unugyada kansarka ee naaska, caleenta, iyo qoyaanka afka. Haweenka maalin kasta cunaan miro halis ah khatarta kansarka.
Citrus waxaa loo tixgeliyaa badeecad cunto, waxay dulleysaa dareenka gaajada, yareey cunnooyinka cuntada, waxay yareyneysaa heerka "xun" kolestaroolka, waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhaqso ah uga takhalusto dhowr kiilo garaam oo dabiici ah. Orange sidoo kale waxay u dhaqmaan sida sedative. Waxay ka caawisaa in laga adkaado hurdo la'aan, hurdo xumo, la qabsasho xaaladaha walaaca, niyad-jabka.
Xiisadaha qalajiyey iyo liin waa liis qurux badan oo qurxiyo ah. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo habaynta ubaxyada, ubaxyada, kaararka, shumacyada, garlands.
Waxyaabaha kiimikada ee kiimikada ah ee citrusku waxay ka dhigeysaa wax aan lagama maarmaan u ah xoojinta nidaamka difaaca, ka hortagga hypovitaminosis, la dagaallama walaaca iyo ilaalinta dhalinyarada maqaarka. Midhaha ayaa faa'iido u leh hababka xididdada iyo wadnaha, waxay xoojisaa derbiyada xididdada dhiigga, waxay hagaajisaa wareegga dhiigga, waxay cadaadisaa cadaadiska dhiigga. Waxay awood u leedahay inay noqoto mid tufaax ah, saameyn xun, ayaa lagu tilmaamaa daal, hurdo la'aanta, waxay caawisaa inay soo celiso awood, waxay siisaa awood nololeed.
Si kastaba ha noqotee, liinta ma aha in la isticmaalo, sababtoo ah waxay keeni kartaa xasaasiyadaha xasaasiyadda. Waxaa lagula talinayaa in aad u isticmaasho daryeelka dadka qaba sonkorowga, boogta sambabada, caloosha oo leh qandho sare.
Xilliga uurka, roodhida ayaa noqon karta badbaadada dhabta ah ee sunta iyo ili ahaanta laga helayo fitamiin C. Ascorbic acid wuxuu ilaaliyaa jirka hooyada mustaqbalka inuu ka yimaado jeermiska cudurada viral iyo bakteeriyada, wuxuu xoojiyaa nidaamka difaaca jirka. Folic acid waxay ka caawisaa ka hortagga dhacdooyinka dhalashada ee ilmaha. Laakin ha iloobin in citrusku yahay xasaasiyad xoog badan oo keeni karta falcelino kala duwan: finan yaryar, lalabo, matag. Sidaa darteed, haweenka uurka leh, u nugul xasaasiyadda, waa in laga reebo cuntada, xaaladaha kale - si loo yareeyo isticmaalka laba miro maalintii.
Waxaa xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan beerista dalagyada liinta ee guriga - calamondin, citron iyo mandarin, iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah cayayaanka.
Isticmaalka alaabta inta lagu jiro naas nuujinta waxay kor u qaadi doontaa dhadhaminta caanaha naaska, waxay ku dhejisaa fiitamiin qiimo leh oo gacan ka geysanaya xoojinta nidaamka difaaca ilmaha. Isticmaalida amaanka leh ee muraayadaha ay sameeyaan hooyooyinka nuujinta waxay ka kooban yihiin dhowr shuruuc:
waxaa lagama maarmaan ah in la gashado liinta macmudka kadib marka ilmuhu gaaro da'da lix bilood;
ha ka cunin wax ka badan laba miro maalintii;
ku cun cunnooyinka 2-3 maalmood;
Ka hor inta aanad ku darin liinta macmacaanka, waa inaad tijaabisaa adiga oo cunaya sharo yar. Haddii jawaab celinta jidhka ilmaha uu yahay mid wanaagsan, qiyaasta ayaa si tartiib ah loo kordhin karaa.
Waa muhiim! Haddii muddada uurka, hooyada kalkaalisada ah ay u keentay dareen-celinta xasaasiyadeed ee sheyga, ka dibna way ka fiicantahay inaad diido inta lagu jiro HB.
Markaad miisaanka hoos u dhacdo
Orange waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo inta lagu jiro miisaanka luminta. Waxay hagaajisaa hawsha habka dheef-shiidka, waxay dhaqaajisaa geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka, waxay xoojisaa dheef-shiid kiimikaadka. Pectin ku jira badeecaddu waxay wax ka geysataa isdaba-joogga jidhka, hoos u dhig cunto xumo iyo dareen dareenka gaajada.
Cuntada, oo ku saleysan isticmaalka citruska, waxay suurtogal u tahay in si dhakhso ah looga takhaluso dhowr kiilo, nadiifinta jirka walxaha waxyeellada leh, yareeya heerarka kolesteroolka. Casiirka cusub ee casiirku wuxuu xoojiyaa dheefshiidka cuntooyinka, wuxuu kordhiyaa dhaqdhaqaaqa caloosha, wuxuu yareeyaa caloosha. Isticmaalka joogtada ah ee badeecaddu waxay siinaysaa mid miro dhaliya, daalinta oo yaraata, taas oo inta badan dhibaato ku ah kuwa raaca raashinka.
Sidoo kale akhri waxyaabo faa'iido leh oo liin iyo goynta habka lagu keydiyo, iyo sidoo kale noocyada iyo beerashada liin ee guriga.
Sonkorowga ma aha wax isir ah u cunida liinta. Citrus waxay saameyn wanaagsan ku leedahay maraakiibta dhiigga, waxay xoojisaa derbiyada halbowlayaasha iyo xididdada. Raadi walxaha ku jira halbeegga sheyga caadiga ah dheelitirnaanta dheecaanka, ha u oggolaan in korodhka cadaadiska dhiigga. Ascorbic acid wuxuu xoojiyaa nidaamka difaaca jirka, wuxuu jirka ka ilaaliyaa infekshannada iyo fayraska. Waa in la xusuustaa in ay lagama maarmaan tahay in la cuno liinta sonkorowga, oo aan lahayn wax kuleyl ah. Qiyaasta maalin walba ee amniga ah waa 1-2 uurjiif. Waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo cabitaanka cabitaanka, sababta oo ah waxay taasi keeni kartaa heerarka gulukoosta. Waxaa wanaagsan in la isku daro liinta macmacaanka, malab ama qashinka cuntada.
Laga soo bilaabo da'da carruurta
Qiimaha nafaqada ee liinta ilmaha jirka waa mid aad u sarreeya. Isticmaalida liinta, carruurta waxay helaan qaybta muhiimka ah ee fitamiin C, iyo sidoo kale walxo kale oo waxtar leh oo lagama maarmaanka u ah koritaanka iyo horumarka jirka. Calcium wuxuu xoojiyaa unugyada lafaha, pectin wuxuu ka caawiyaa habdhiska nidaamka dheefshiidka, ascorbic acid wuxuu kordhiyaa howlaha difaaca habka difaaca jirka.
Si aad u barato carruurta inay isticmaalaan alaabtan waxay noqon kartaa hal sano. Qiyaasta bilowga ah waa inay ahaato hal mar. Maqnaanshaha xasaasiyadda ama xammilxumada shakhsi ahaaneed, qiyaasta daawada ayaa si tartiib ah loo kordhin karaa. Ilaa 5-6 sano, qiyaasta maalin kasta ee liinta waa in aysan ka badnayn 1 miro.
Baro wax badan oo ku saabsan macaan - citrus, jilib beeleed iyo jajab cad.
Sida loo doorto liis wanaagsan oo macaan leh marka aad iibsaneysid
Si aan waxyeello u geysan caafimaadkaaga sababtoo ah mid aan fiicneyn oo la soo doortay, miraha tayada hooseeya, waa inaad ogtahay dhowr waxyaalood oo ku saabsan sida loo kala saaro miro fiican oo macaan leh.
Tifaftiraha tayo sarre leh wuxuu leeyahay qaab dhismeedka cufan.
Orange waa inuu ahaadaa mid culus oo aad u kareysa. Miisaanka ka weyn, juuer miro.
Dheefta ugu fiican iyo tayada daawooyinka ayaa midho ku koray xeebaha Mediterranean ama Maraykanka.
Midhuhu waa weyn yahay, way ka yar tahay macaan. Si ka fiican sidii loo siin lahaa doorashada miro dhexdhexaad ah.
Marka aad dooranaysid sheyga waa in aan lagu hagaajin midabkiisa ama dhumucdiisii ​​diirka. Xitaa miro cagaaran oo leh maqaar qaro weyn ayaa noqon kara mid aad u macaan inta aan laga helin duurjoogta dhalaalaya.
Ma taqaanaa? Maydhisku ma laha dhaqaajinta guryaha ka dib goosashada. Haddii aad soo iibsatay miro aan qaan gaarin, markaa guriga ma dhicin.
Xaggee iyo heerkulka ay ku kaydiso guriga
Maydhayaashu waa kuwo aan la qabsan karin kaydka. Way ku badbaadi karaan qalalan, hawo wanaagsan, meel mugdi ah heerkulka qolka ama qaboojiyaha, qaybta hoose, loogu talagalay khudaarta iyo miraha, muddo laba toddobaad ah.
Xeerarka aasaasiga ah ee kaydinta waa maqnaanshaha barafka. Ha ku qaboojin miro ama ha qaboobin. Sidoo kale laguma talineynin in alaabta kale ee agagaarkooda ku hareeraysan, gaar ahaan qoyaan fara badan, sidaas awgeed miraha liinta ma dhumiyaan carafkooda.
Maaddaama dhadhanka cajiibka ah iyo carafka ugu quruxda badan, liinta waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee karinta, taas oo loo isticmaalo karinta cuntada. macmacaankasidaas darteed kala duwan saladh, suugo iyo cunto fudud.
Saxarka, casiirka iyo adkaanta miraha kareysa ayaa loo isticmaalaa in lagu cabo cabitaan, tinctures, jams, saxarado, caano iyo marmalades, saladh iyo cunto fudud, suugo hilibka, kalluunka iyo suxuunta khudradda. Alaabta wuu fiican yahay oo leh jiis, malab, lows iyo berry. Noocyada miro ayaa ah mid lagu daro shaaha iyo khamriga lakulmay. Citrus si fiican u waafaqsan xawaashka, gaar ahaan sinjiyada iyo qorfe.
Qaswadayaasha waxay ku daraan diirka miro miro ah, macmacaanka, cocktails iyo cabitaanada. Mid ka mid ah macmacaanka Faransiis ee ugu fiican waa candhuufta liinta, kaas oo leh dhadhan aan caadi ahayn iyo caraf udgoon.
Imisa ayaad cuni kartaa maalintii
Xeerka ugu muhiimsan ee waa in la raaco marka la cunayo miraha dhirta orange-ka ah ee raacsan xeerarka. Badbaadada qof weyn oo caafimaad qaba waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay qiyaasta maalin kasta laba boodhadh dhexdhexaad ah. Isticmaalka maalin kasta ee cuntada ku jirta cuntada laguma talinayo. Cunto miro cusub ugu fiican, sababtoo ah casiirku waxtar ma leh.
Tayada liinta, liin iyo lafaha waxaa lagu daraa hal miro yar - koonfureed, oo badanaa lagu koray dhaqanka dheriga. Miro yar yar ayaa ka buuxa maaddooyin wax ku ool ah, cusub ayaa la cunay diirka, sidoo kale waa la qalajiyey.
Miyuu suurtagal ah in la cuno diirka liinta
Dadka badankood waxay iska tuuraan diirka of orange, oo tixgelinaya in ay waxtar lahayn. Oo waa wax aan micne lahayn, sababtoo ah waxay ka leexiyaan qiyaasta nafaqooyinka: ascorbic acid, vitamin A, calcium iyo macdano kale oo badan. Qalab la qalajiyey oo cusub ayaa lagula talinayaa in lagu daro shaaha ama wax lagu daro, infusions iyo cabitaanada kale.
Duufku wuxuu leeyahay sifooyin yar oo jilicsan, wuxuu hagaajiyaa habka dheef-shiidka, wuxuu ka caawiyaa nadiifinta jirka, yareynta kolestaroolka, xitaa la dagaallami karo gooryaanka. Peel waa alaabta ceeriin ah ee wax soo saarida mucjisada, saliidda ee muhiimka ah ee saliidda ah, oo leh salaaxa, anti-bararka, bogsashada boogta, dib u soo kabashada iyo jeermiska guryaha. Beauticians waxaa lagula talinayaa inay ku daraan dhawr dhibcood oo saliid ah si ay u sameeyaan qurxiyo dhaqameed. Shidaalku wuxuu si fiican u nuujiyaa oo u nuugaa maqaarka, wuxuu keenaa tignoolaji, wuxuu hagaajiyaa cufnaanta, wuxuu dib u soo celiyaa wejiga oo wuxuu ku noqdaa iftiin dabiici ah.
Waa muhiim! Sumeeyayaasha casriga ah ee liinta si loo hagaajiyo gaadiidka iyo nolol maalmeedyada sheybaarka, dusha sare ee maaddada kiimikooyinka gaarka ah. Sidaa daraadeed, ciriiriga miraha citruska noocan ahi wuxuu halis u noqon karaa caafimaadka bini'aadamka. Waxaa lagu talinayaa in si fiican loo nadiifiyo oo biyo raaci ka hor inta aan la daboolin diirka.
Sida loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka
Orange waa dhakhtar quraan oo weyn kaas oo noqon doona xalka ugu fiican ee cudurada kala duwan. Cunto ka soo baxa waa mid aad u fudud in la diyaariyo, laakiin, waqti isku mid ah, sii saameyn la taaban karo.
Dadka ku dhacda caloosha joogtada ah, waa lagama maarmaan in subaxdii iyo ka hor wakhtiga hurdada ay cunaan hal ruudh yar ama cab cabitaan casiir cusub oo ay weheliyaan saxarka. Badeecadu waxay xoojineysaa xiidmaha si ay u shaqeeyaan si adagna aroortii ayaa dhibaatada loo xallin doonaa.
Xilliga caadada xanuunka leh
Dhiig xanuun leh, daawada dadku waxay soo jeedineysaa isticmaalka tincture diirka liinta: diirka mid ka mid ah liinta ayaa si fiican loo dhaqay, la jajabiyey, biyo ku shubay karkaraya kuna adkeyso 30 daqiiqo. Faleebo qaadashada 3-4 jeer dhowr maalmood. Faleerahani wuxuu kaloo kaa caawin doonaa wakhtiyada culus.
Dad badan ayaa ogaanaya shaaha bergamot, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo liinta. Intaa waxaa dheer, bergamot waxaa lagu kori karaa dheri guriga.
Xanuun dhiig iyo cirrid
Isticmaalka casiirka liinta ayaa kaa caawin doona buuxinta heerarka calcium iyo xoojinta ilkaha. Intaa waxaa dheer, citric acid ee ka kooban qaybta liinta ayaa saamayn togan ku leh xaaladda cirridka, waxay yareysaa caabuqa, waxay ka hortagtaa dhiigbaxa. Lakabka gudaha ee madow ee midhaha - albedo - waxaa ku jira dhowr waxyaalood oo kuu oggolaanaya in aad caadi u yeelato heerkulka acidity ee afka gudahiisa. Waxaa lagula talinayaa in aad cirridka ku xoqdo qolofka nadiifka ah ama diirka, kadibna ilkaha ku dhaq biyo nadiif ah.
Miraha geedka liinta ayaa kaa caawin doona inaad la qabsato cadaadiska sare. Waxay ku jiraan saamiga ugu wanaagsan ee potassium iyo sodium, taas oo u oggolaaneysa in ay caadi u kacaan cadaadiska dhiigga, xoojiyaan darbiyada xididdada dhiigga, sidaas darteed hagaajinta shaqada wadnaha. Waayo cadaadiska cadaadiska ayaa adeegsanaya buuggan: 70 ml oo casiir liin ah ayaa lagu qasan yahay 1 tsp. malab
Qaado 200 ml oo ah isku darka maalin kasta, oo loo qaybiyay 3 qiyaasood. Ha ka badin qiyaasta cayiman, sababtoo ah taasi waxay keeni kartaa cadaadiska.
Sidee loo isticmaali karaa kashaqeynta guriga
Qodobada faa'iidada leh ee oranjiyada waxaa sidoo kale lagu yaqaanaa kiknoolojiyada. Casiirkiisa, saxarka iyo diirka ayaa loo isticmaalaa si loogu diyaariyo waji badan oo maqaarka iyo timaha. Iyadoo ay saldhig u tahay kiriimka, looska, tonic qaboojiye.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan faa'iidooyinka iyo isticmaalka miraha qalaad: taariikhda, berde, lychee, papaya, arbutus, feijoa, meds, longan, guava, kivano, cananaaska.
Si deg deg ah oo hufan dib u soo celi timaha, si aad u siiso iftiin iyo iftiin, si aad uga takhalustaan ​​dabacsanaan, waxay caawin doontaa si aad u fudud maaskaro: cinjir cad oo diirran oo hal xabbo leh oo lagu daro 2 tsp. malab
Isku dar ayaa isla markiiba loo isticmaalaa si nadiif ah, timo qoyan, oo fiiro gaar ah u leh xididada. Maaskarada ku rid shukumaanka ilaa 40 daqiiqo, ku dhaq biyo diirran adiga oo aan shaambo lahayn.
Beautiitiyadu waxay kugula talinayaan in lagu daro dhawr dhibcood oo saliideed oo muhiim u ah shaambada. Tani waxay daaweyn doontaa cagaarshowga, ka saar maqaarka qalalan, ka ilaali timaha jilicsan.
Wajiga iyo jirka
Ka takhalus finan, madax madow iyo finan waxay caawin doontaa mid aad u fudud maaskareey. Diyaarintiisa, hal miro yar oo leh diirka ayaa lagu rusheeyaa haraamis, iyo gruel-ka soo-baxay waxaa lagu dabaqayaa meelaha dhibaatada ah 10-15 daqiiqo. Maskacyada waxaa la sameeyaa maalin kasta, illaa dhammaadka dhamaystirka dhibaatada.
Badeecadu waxay awood u leedahay inay la qabsato cilladaha da'da adkee maqaarka, dib u habee, samee fara badan oo dabacsan. Caawimadan maaskaro: saxarka miro mid ayaa lagu qasan yahay oatmeal iyo 1 tsp. malab si aad u hesho cufnaanta, xusuusin of cream labeen dhanaan. Macnaheedu waxaa lagu daboolayaa khadadka duugista si aad u nadiifiso maqaarka, kadib maydhay 20 daqiiqo kadib. Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo koorso 10 hab-raacyo gabaad ah, maalin kasta.
Si aad u ilaaliso cufnaanta jidhka oo idil, ku dar dhawr dhibcood oo ah saliid baako oo muhiim ah si aad ugu jiliciso ama caanaha jidhka.
Ha iloobin in rifafku uu yahay xasaasiyad xoog leh oo kicin kara horumarinta falcelino diidmo oo kala duwan oo jirka ah: lallabbo, finan yaryar, matag, madax-wareer, dermatitis ee carruurta.Ha u isticmaalin badeecada dadka qaba xanuunka shakhsi ahaaneed.
Asaasiga ku jira miro ayaa ka xanaajin kara kacsanaanta boog-galka ama duodenal, caloosha.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan qaababka faa'iidada leh iyo isticmaalka miraha iyo furutada: tufaaxa, isteroberi, cagaarshow, boodh, jilicsanaan, miro, khudaar, nectarine, cherry, cherry macaan, raspberry (madow), strawberry, miro yar, currant (casaan, cad, madow) , blueberries, buckthorn badda, caleemaha, lingonberries, qaboojiyaha, amiirrada, yoshty, goji, bukaa, chokeberry.
Isticmaalka xad-dhaafka uurjiifku wuxuu keeni karaa:
horumarinta cudurka macaanka;
dhibaatooyinka ilkaha iyo ciridka;
Waa inay ka taxaddaraan inay cunaan dumarka uurka leh iyo kuwa nuujinaya. Dadka qaba herpes waa inay si ku meel gaar ah uga tagaan isticmaalka, maadama ay kiimikada ku jirta alaabtu ay sii xumeyn karto cudurka. Waa ka hortaga midhaha miraha leh cunaha pankreatitis. Dhakhaatiirtu kuma talinayaan inay cunaan cuncun on calool madhan ama cuntada ka hor, sababtoo ah taasi waxay horseedi kartaa burburka nidaamka dheef-shiidka.
Orange waa mid ka mid ah midhaha ugu caansan iyo midka caamka ah ee laga heli karo dukaamada dukaamada sannadka oo dhan. Taasi waa sababta ay faa'iido iyo bogsashada guryaha aysan ka hor istaagi doonin macaamil kasta in uu ogaado. Citrus waa mid faa'iido leh, labadaba dadka waawayn iyo carruurta, waxay ku caawin doontaa in lagu xalliyo dhibaatooyin caafimaad oo badan, oo jirka ku dheehanaya maadooyin qiimo leh, iyo sidoo kale dhadhanka aan la ilaawi karin.